creative - Synonyms of creative | Antonyms of creative | Definition of creative | Example of creative | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for creative
Top 30 analogous words or synonyms for creative
ခရီရေးတစ်ဖ် ကွန်မွန်း လိုင်စင် Creative Commons လိုင်စင်ကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် Lawrence Lessig စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလိုင်စင်အများစုရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အွန်လိုင်း Creative (ဖန်တီးမှု) နှင့်ပတ်သတ်၍ လွယ်ကူစွာဖတ်ရှုနိုင်ရန် အဓိကရည်ရွယ်ပါတယ်။ အဆိုပါ လိုင်စင်အုပ်စုများတွင် Some rights reserved ဟုသော စကားစုမှာပါဝင်လေ့ရှိပါသည်။ မတူညီကြတဲ့ Creative Commons လိုင်စင်ခြောက်မျိုးရှိပါတယ်။ အဆိုပါလိုင်စင်များဟာ အများဆုံးအသုံးပြုနေကြတဲ့ လိုင်စင်အမျိုးအစားများဖြစ်ကြပါတယ်။ အဆိုပါလိုင်စင်ကိုလည်း အချို့အချက်များဖြည့်စွက်၍သော်လည်ကောင်း ၊ ပြင်ဆင်၍သော်လည်းကောင်း လိုင်စင်အသစ်တစ်ခုအနေဖြင့် ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ Creative Commons Licenses ကို တရားစီရင်ရာနေရာဒေသပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားနိုင်သလို တကမ္ဘာလုံးမှာအတူတူလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ခရီရေးတစ်ဖ် ကွန်မွန်း လိုင်စင် အခြေခံ Creative Commons လိုင်စင်ကို CC attribution လို့ခေါ်ပါတယ်။
ခရီရေးတစ်ဖ် ကွန်မွန်း လိုင်စင် အထက်က လိုင်စင် တွေအပြင် CC0 လို့ခေါ်တဲ့ owner တွေက လျှော့ပေါ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ လိုင်စင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ သူကတော့ public domain လိုပါပဲ။ သူအောက်မှာကတော့ “no rights reserved” လို့ရေးထားလေ့ရှိပါတယ်။ Creative Commons လိုင်စင်တွေဟာ ရှင်းလင်းပြီးဖတ်ရလွယ်ကူပါတယ်။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း Wikipedia ဟာ ShareAlike လိုင်စင်ကိုသုံးပါတယ်။ နာမည်ကြီး images hosting တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Flickr ကလည်း ဓာတ်ပုံတွေအတွက်ကို Creative Commons လိုင်စင်ကိုသုံးပါတယ်။သင်အနေနဲ့လည်း စိတ်သန့်သန့်နဲ့ Creative Commons လိုင်စင်အောက်ကဟာတွေကိုပဲအသုံးပြုချင်တယ် google ကနေတစ်ဆင့်ရှာချင်တယ်ဆိုရင် လည်း ဒီမှာဖြေထားတာရှိပါတယ်။
ကေအမ်ဒီ Intended to provide knowledge of creative advertisement design, photo-editing and to beaprofessional designer.
ပုရပိုက်ဖောင့် ပုရပိုက် မြန်မာယူနီကုဒ် ဖောင့် - မြစေတီ ကို ထုတ်လုပ်သော Solveware Solution Company မှ တီထွင် ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချီပြီး GPL နှင့် Creative Common License များအောက်တွင် အခမဲ့ ဖြန့်ချီသည်ဟု ပုရပိုက်၏ ဝဘ်စာမျက်နှာ တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သင်္ချာဆိုင်ရာအလှအပ သင်္ချာပညာရှင် အများအပြားနှင့် လူအချို့သည် သင်္ချာဆိုင်ရာ ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ၊ (သက်သေပြချက်၊ သီအိုရီ၊ သီအိုရမ်နှင့် စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံအကြံဉာဏ်များ စသည့်) လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ယေဘုယျအားဖြင့် သင်္ချာဘာသာတစ်ခုလုံကို လှပသည်ဟု မြင်လေ့ရှိသည်၊ သင်္ချာနှင့်ပတ်သက်၍ လုပ်ကိုင် ပြောဆို ဖော်ပြနေရခြင်း၌ မွေ့လျော်ကြသည်။ ဤသို့ သင်္ချာထဲရှိ အလှသစ္စာဟု ဆိုသည့်အရာကို သင်္ချာဆိုင်ရာ အလှအပ (mathematical beauty) ဟု ခေါ်သည်။ ထိုသို့အမြင်ရှိသူများက သင်္ချာကို အနုပညာတစ်ခုအဖြစ် ပြောဆိုတတ်ပြီး၊ အနည်းဆုံအနေဖြင့် ဖန်တီးတီထွင်ရသည့်အလုပ် (creative activity) တစ်ခုအဖြစ် မြင်ကြသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဘူကစ်ဂျာလီ အမျိုးသား အားကစားကွင်းတွင် ၁၉ ဩဂုတ် ၂၀၁၇ ခုနှစ် MST () ၂၀:၁၇ တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး မလေးရှားယဉ်ကျေးမှုနှင့် သမိုင်းကြောင်းကို အဓိကထား ပြသခဲ့သည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပမှု ဦးစီးခြင်းကို မလေးရှားရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ မှ မလေးရှားတပ်မတော်နှင့် ပူးပေါင်း၍ Memories Entertainment creative team မှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖွင့်ပွဲကျင်းပချိန်ကို မလေးရှားနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသော ၂၉ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစားပြိုင်ပွဲကို အမှတ်ရစေရန် ရည်ရွယ်၍ ၂၀:၁၇ တွင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ချန်ဆားမြို့ In recent years, Changsha has become an important creative center for TV and entertainment arts, with its many TV stations producing some of the most popular programs in China, including Super Girl. These programs have also broughtanew entertainment industry, including singing bars, dance clubs, theater shows, as well as related businesses like hair salons, fashion stores, and hot spicy snacks at night(esp. in the summer time). While Changsha has developed into an entertainment hub the city has also become increasingly westernized and attractedagrowing number of foreigners.
ဗွီ-၂ ဒုံးပျံ ၁၉၂၀နှောင်းပိုင်းတွင် လူငယ်သိပ္ပံပညာရှင် ဝါနာဗွန်ဘရောင်းသည် n the late 1920s,ayoung Wernher von Braun acquiredacopy of Hermann Oberth's book, "Die Rakete zu den Planetenräumen" ("The Rocket into Interplanetary Space"). Starting in 1930, he attended the Technical University of Berlin, where he assisted Oberth in liquid-fueled rocket motor tests. Von Braun was working on his creative doctorate when the Nazi Party gained power in Germany. An artillery captain, Walter Dornberger, arranged an Ordnance Department research grant for von Braun, who from then on worked next to Dornberger's existing solid-fuel rocket test site at Kummersdorf. Von Braun's thesis, "Construction, Theoretical, and Experimental Solution to the Problem of the Liquid Propellant Rocket" (dated 16 April 1934), was kept classified by the German army and was not published until 1960. By the end of 1934, his group had successfully launched two rockets that reached heights of .
ဝါနာဗွန်ဘရောင်း Von Braun was working on his creative doctorate when the National Socialist German Workers Party (NSDAP, or Nazi party) came to power inacoalition government in Germany; rocketry almost immediately became part of the national agenda. An artillery captain, Walter Dornberger, arranged an Ordnance Department research grant for Von Braun, who then worked next to Dornberger's existing solid-fuel rocket test site at Kummersdorf. He was awardedadoctorate in physics (aerospace engineering) on July 27, 1934 from the University of Berlin forathesis titled "About Combustion Tests"; his doctoral advisor was Erich Schumann. However, this thesis was only the public part of von Braun's work. His actual full thesis, "Construction, Theoretical, and Experimental Solution to the Problem of the Liquid Propellant Rocket" (dated April 16, 1934) was kept classified by the army, and was not published until 1960. By the end of 1934, his group had successfully launched two rockets that rose to heights of 2.2 and 3.5 kilometers.